Dowladda Maldives oo ciidanka ku amartay in aysan u hoggaansamin xukunka garsoorka - BBC News Somali
Dowladda Maldives oo ciidanka ku amartay in aysan u hoggaansamin xukunka garsoorka
Image caption Booliiska ayaa soo dhexgalay taageerayaasha mucaaradka oo u dabaaldagayay xukunka maxkamada Jimcihii
Dowladda dalka Maldives ayaa ku amartay ciidamada ammaanka in ay ku gacan seyraan tillaabo waliba oo maxkamada ugu sareysa dalkaasi ay ku doonayso n lagu xiro amaba xilka looga qaado madaxwayne Abdulla Yameen.
Maxkamada ayaa jimcihii gudoomisay in maxkamadayntii madaxwaynihii hore ee dalkaasi Mohamed Nasheed ay ahayd mid aan dastuuri ahayn.
Maxakamadda ayaa sidoo kale amartay in xabsiga laga siidaayo sagaal xildhibaan taasi oo mucaaradka ka dhigaysa in ay dib u hantaan aqlabiyadii ay baarlamaanka ku lahaaayeen.
Dowladda Maldives oo diiday in ay u hogaansanto amarka ayaa taa badalkeeda waxa ay joojisay howshii baarlamaanka dalkaasi.
Xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi ayaa sheegay in tillaabo waliba oo lagu xirayo madaxwaynaha ay tahay sharci daro.
Xeer ilaaliyaha guud ee Maldives Mohamed Anil ayaa saxaafada la hadlay Axaddii isaga oo ay la socdaaan madaxa ciidamada qalabka side, Gen Shiyam, iyo taliyaha booliiska Abdulla Nawaz, oo isagu ninkii jagadaasi uga horeeyay xilka laga qaaday ka dib markii uu sheegay in amarka maxkamadda uu u hogaansamayo.
Mr Anil ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in maxkamada ugu sareysa dalkaasi ay isku dayi karto in ay gudoomiso in madaxwaynaha uusan awoodda sii hayn.
Image caption Mr Anil ayaa lagu eedeeyay in uu cuburiyo dadka ka soo horjeeda
Waxa uu yiri: "waxa aan helnay warar sheegaya in waxyaabo ay dhaci karaan taasi oo horseedi karta dhibaato amniga qaranka ah.
"Amar waliba oo ka yimaada maxkamada ugu sareysa dalka oo lagu xirayo madaxwaynaha waxa ay noqonaysaa mid aan dastuuri ahayn oo sharci daro ah" ayuu yiri.
"Waxa aan amray booliiska iyo militariga in aysan dhaqangalin amar waliba oo aan dastuuri ahayn" ayuu intaa ku daray Mr Anil.
Xaflad si toos ah looga tabinayay telefishinka dalkaasi ayaa madaxda militariga iyo booliiska waxa ay ku dhaarteen in ay naftooda u huri doonaan difaaca dowladda.
Dhanka kale boqolaal taageerayaasha mucaaradka ah ayaa isugu soo baxay caasimadda , Malé,halkaasi oo ay ka dhigeen dibad bax ay ku dalbanayaan in la siidaayo maxaabiista siyaasadeed lana xushmeeyo datuurka dalka.
Siyaasiyiinta la xiray
Afhayeen u hadlay xisbiga mucaaradka ee Democratic Party, Hamid Abdul Ghafoor,ayaa sheegay in booliiska ay doonayaan in ay xiraan laba garsoore oo sarsare oo uu ka mid yahay madaxa cadaalada , iyaga oo ku eedeeynaya in ay laaluush qaateen.
Waxa uu intaa ku daray in dowladda ay isku dayayso in ay la wareegto awoodda garsoorka.
Mr Nasheed ayaa dhankiisa ku gacan seyrida dowladda ay ku gacan sayrtay amarka maxkamada waxa uu ku tilmaamay mid u dhiganta afgembi militari.
Mr Nasheed, oo imika ku sugan dalka Sri Lanka, ayaa sheegay in ay qasab tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu isu casilo madaxwayne Yameen , waxa uuna ugu baaqay ciidamada ammaanka in ay dastuurka taageeraan.
Image caption Mr Nasheed
Dalka Maldives ayaa waxaa ka jirtay xasilooni daro siyaasadeed tan iyo intii Mr Nasheed, oo ahaa madaxwaynihii ugu horeeyay oo si dimuqraadiyad ah loo doorto dalkaasi lagu helay dacwad ahayd argagixiso iyada oo la cuskanayo sharciga ka hortaga argagixisada ee 2015.
Mr Nasheed oo lagu xukamay 13 sano oo xarig ah ayaa waxa arrintaas cambaareeyay beesha caalamka waxaana magangalyo siyaasadeed laga siiyay dalka UK halkaasi oo uu u tagay si qalliin loogu sameeyo.
Dalkani ku yaalla badwaynta Hindiya ayaa waxaa nidaamka xisbiyada badan laga hirgaliyay 2008, balse tan iyo intii uu xukunka la wareegay madaxwayne Yameen 2013 waxaa su'aalo badan ay ka taagnaayeen xorriyatul qowlka ,xariga dadka ay siyaasada isaga soo horjeedaan iyo madaxbanaanida garsoorka.